မြန်မာလို့အခေါ်မခံကြရရှာတဲ့ ဗမာတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » မြန်မာလို့အခေါ်မခံကြရရှာတဲ့ ဗမာတွေ
Posted by kai on Mar 12, 2010 in Critic, Society & Lifestyle | 14 comments
Eleven Media Group U Sein Win
မြန်မာတွေ ကမ္ဘာကို ထွက်လာကြတာသိပ်များတယ်။ များဆို မြန်မာ့ရာဇ၀င်၊သမိုင်းမှာ အများဆုံးထွက်ကြတဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေပဲ။ တချို့ က စိတ်နာနာနဲ့ ထွက်ခဲ့ကြတာပါ။ တချို့ ကတော့ မလွဲမရှောင်သာလို့ပေါ့။ “မဟာမြန်မာရွေ့ပြောင်းမှုကြီး”လို့ ရေးခဲ့ဖူးတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမေရိကရောက်ရင် အချိန်တွေကြာလာကြတော့ အမေရိကန်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့စံနစ်က (တရားမ၀င်ခိုးဝင်လာလဲ)ဒီမြေကြီးရောက်ပြီး အနှစ်၂၀တော့ မစောင့်ရပါဘူး။ ဆွမ်းကြီးလောင်းတဲ့ ပွဲနဲ့ကြုံတာပါပဲ။ အဲဒီလိုနဲ့ သမ္မတတွေအဆက်ဆက် ရောက်နေတဲ့ လူတွေကို ဗီဇာရှိတာ၊မရှိတာအပထားပြီး အကုန်နိုင်ငံသားပေးပစ်ပါတယ်။ အခုနှစ်မလည်း သမ္မတအိုဘားမားက လုပ်ပါဥိးမယ်…(မျှော်လင့်ရပါတယ်။ )။ အကြီးအကျယ်ကို ဒီဘိတ်လုပ်နေကြပြီလေ။ အခုလုပ်နေတဲ့ ကျမ်းမာရေးပြုပြင်မှုတွေပြီးရင် ကိုင်တော့မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါက ရွေးကောက်ပွဲကတိလည်းဖြစ်နေလို့ ပါ။ တရားမ၀င်နေနေသူတွေကလည်းမနည်းပါဘူး။ ၁၀သန်းကျော်တော့အသာကလေးပါပဲ။ ၁၀သန်းနော..။၁၀သန်း…ဒီရက်ပိုင်း လက်သိပ်ထိုးကြားရတာလေး ပြောရရင် တယောက် ၅၀၀၀ တောင်းမယ်ဆိုသတဲ့။ အဲဒါဆွေးနွေးနေကြတယ်တဲ့။
အဲဒိလိုနဲ့ အမေရိက နိုင်ငံသားဖြစ်ကြတယ်ပေါ့။ နယ်ချရယ်လိုက်ဖ်စစ်ဒဇင်ပေါ့။ နိုင်ငံသားခံယူလိုက်ကြတယ်ပေါ့။ ရှိပြီးသားအမေရိကန်တွေနဲ့ ဘာမှသိပ်မကွာပါဘူး။ သမ္မတ တက်လုပ်လို့ မရတာတခုပဲ ကွာပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားက ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး အာနိုးကြီးလေ။ အမေရိကမှာမွေးတာမှ မဟုတ်တာနော။ သူလည်းဒုတိယသမ္မတအထိ ဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
ပြောရရင် အခုသမ္မတ အိုဘားမားလည်း အမေရိကမြေဖြစ်တဲ့ ဟာဝိုင်ယီမှာ မွေးတယ်ဆိုပေမဲ့ အဖေက အမေရိကန်မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံသားကို မဖြစ်လိုက်ရပဲ အမေနဲ့ကွဲပြီး သူ့ ကင်ညာနိုင်ငံ သူပြန်ပြီးနေတာပါ။ ဆိုလိုတာက သမ္မတအိုဘားမားက အမေရိကန်စစ်စစ်ကြီးပါ။ ကင်ညာကြီးလို့မခေါ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဖေက အမေရိကန်ဟုတ်ဘူးပေါ့။
ထူးခြားတာတခုက ၂၀၀၈က အိုဘားမားနဲ့ သမ္မတပြိုင်ရွေးခံတဲ့ ရီပါ့ဗလစ်ကင်န်အမတ် မက်ခ်ကိန်းဆို အမေရိကမြေမှာမွေးတာတောင်မဟုတ်ပါဘူး။ သူက ပနားမားနိုင်ငံမှာမွေးတာတဲ့။ ဒါပေမဲ့ မိဘနှပါးစလုံးကတော့ အမေရိကန်တွေပါ။ အဲဒီမှာ စစ်စခန်းချတုံးက သူ့ကိုမွေးလိုက်တာပါ။
အမေရိကန်ဖြစ်ပြီဟေ့ဆိုရင် လူမျိုးတွေ၊အသားအရောင်တွေ ခွဲခြားဆက်ဆံလို့ မရတော့ပါဘူး. ခွဲဆက်ဆံရင် ဥပဒေတွေက အရေးယူပါလိမ့်မယ်။ ဒါက ကမ္ဘာ့အတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအကြောင်းပါ။
ဒီနေ့ အင်တာနက်ထဲလိုက်နှိုက်ရင်း ဆရာ လူထုဦးစိန်ဝင်းရဲ့ ဆောင်းပါးဖတ်မိပါတယ်၊ ကြိုက်လို့ အောက်မှာ ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
ဆရာက မြန်မာပြည်ထဲကနေပြီး ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကို ဦးတည် ဝေဖန်ဆန်းစစ်ကြည့်နေပုံပေါ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဆောင်းပါးထဲမှာကိုပဲ မြန်မာပြည်ပေါက် တရုတ်မလေးတွေ ဆိုတာကို အထူးဇတ်ဆောင်တွေအဖြစ် နဲ့ ဖတ်မိတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာရှိလာပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာမွေး အမေရိကနေပြီး အခုလို တခြားအမေရိကန်တွေနဲ့ သွေးစီးဆင်းတာတွေကို ဦးတည်ပြီး ခွဲပြောခံနေရရင်တော့ …အင်း..နည်းနည်းတမျိုးတော့ဖြစ်မိမလားပဲ..။ မြန်မာပြည်ပေါက် တရုတ်တွေခမျာလည်း မြန်မာပြည်မှာအမေအဖေ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်မွေးပြီး မြန်မာ(ဗမာ)လို့အခေါ်မခံရတဲ့ ဘ၀တွေနဲ့ပါလား။ ကုလားတွေရောပေါ့နော..။ချဲ့လိုက်ရင် တိုင်းရင်းသားတွေပါ ပါလာပြီး သူတို့ကို တော်တော်ကိုယ်ချင်းစာမိလာတော့တာပါပဲ..။
ထားပါတော့…စာမှာ ဆရာဆိုလိုချင်တဲ့ ဆရာ့ရဲ့ စေတနာကို မြင်ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဖတ်ကြည့်ပါ။လို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။“သူတို့ပြန်လာကြမှာပါ” ဆိုတာလေးကို သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကောင်းစားနေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တတ်ထားတဲ့အတွေ့အကြုတွေ ပညာတွေနဲ့သားရွေအိုးထမ်းပြီးတနေ့ ပြန်လာကြမှာပါ။
တရုတ်ပြည်တုံးကတော့ သူတို့တိုင်းပြည်အပြင်ရောက်နေတဲ့ တတ်သိပညာရှင်တွေကို အစိုးရကကို လက်ကမ်းကြိုပြိး ခေါ်ပါတယ်။ သူတို့ပြန်ကြတာပဲ။ တိုင်းပြည်က ပညာတွေအပြင်၊ ငွေကြေးအရင်းအနှီးတွေပါ ရတာပေါ့။
စာတွေဖတ် ပြီးရင် ကွန်မန့် မှာ ရေးချင်တာလေးတွေ ချရေးထားခဲ့ပါဦး။ မြန်မာတွေရဲ့ သမိုင်းမှာ အမှတ်တရလေးဖြစ်ကျန်နေရစ်အောင်ပါ။
အနှစ်နှစ်ဆယ်၊ အစိတ် နိုင်ငံခြားသွားမယ့်သူတွေကို အင်္ဂလိပ် စကားပြောသင်တဲ့ ဆရာလုပ်ခဲ့တာဆို တော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအတော်များများမှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေထောင် နဲ့ချီပြီးရှိနေကြပါတယ်။ မြန်မာပြည် ဟာ သူတို့ပညာနဲ့မထိုက်တန်သေးလို့ ပြန်မလာဘူးလို့ ပြောတဲ့သူ ကိုယ့်ကျောင်းသူကျောင်းသားထဲက လေး ငါးယောက်ထက်မပိုပါဘူး။ အများစုက မြန်မာပြည်ကို လွမ်းတသသနဲ့ နေနေကြတာချည်းပါ။ တွံတေးသိန်းတန်နဲ့ ဟင်္သာတထွန်းရင် သီချင်းခွေတွေဆို ကိုယ်ကသာနားမထောင်တာ တပည့်တွေမှာလို့ ခဏခဏ၀ယ်ပို့နေ ရတယ်။ တချို့များ ကြံကြံဖန်ဖန် ကျောက်ငရုတ်ဆုံနဲ့ လဲမှို့ခေါင်းအုံး တောင်မှာလို့ပို့ရတယ်။ အမေရိကန် မှာ မွေးပြီး ဟိုမှာပဲကြီးတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော မြေးယောက်ျားလေးက တောင်မြန်မာပြည်ကအချဉ်ထုပ်တွေ နဲ့ လက်ဖက်သုပ်ကိုသိပ်ကြိုက်တာ။ ”များများနဲ့မြန်မြန်ပို့ပါဖိုးဖိုး” လို့ဖုန်း ဆက်တိုင်းပြောလေ့ရှိပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တယ်ထင်သလား။ ဗြဟ္မစိုရ်တရားနဲ့ ဟီရိသြတပ္ပတရားတွေကို နားလည် သဘောပေါက်ပြီး လိုက်နာကျင့်သုံး မှ မြန်မာလူမျိုးစစ်တာ။ နိုင်ငံခြားမှာ ဘယ်လောက်အကြာကြီးနေနေ ဒီတရားတွေကို လိုက်နာကျင့်ကြံနေသရွေ့မြန်မာလူမျိုးလို့ ခေါ်နိုင်တယ်။ ဒီ တရားတွေကို လုံးဝပစ်ပယ်ပြီး ‘ဘယ်သူသေသေငတေမာပြီးရော’ ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးထားသူဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာနေလည်း မြန်မာလူ မျိုးလို့ အခေါ်ခံရဖို့ မထိုက်တန်ပါဘူး။ မြန်မာစိတ်၊ မြန်မာစရိုက်ရဲ့ အနှစ် သာရက ‘အတ္တ’ ကိုပယ်ခွာခြင်းဖြစ်တယ်။ ဗုဒ္ဓဆုံးမခဲ့တဲ့ ‘အနတ္တ’ တရား ကိုဦးထိပ်ထားကြတယ်။ ”ဘယ်သူ သေသေ ငတေမာပြီးရော” စိတ်က ‘အတ္တ’ လွန်ကဲမှုဖြစ်တယ်။ လူအများ ဘာဖြစ်ဖြစ် ‘ငါ’ ကောင်းစားဖို့သာ အဓိကဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ ဒီလူမျိုး တွေက မျောက်ပြဆန်တောင်းလုပ်တာမျိုးကိုလည်း ရှက်ရကောင်းမှန်း မသိဘူး၊ကြောက်ရကောင်းမှန်းလည်း မသိဘူး။ မေတ္တာ၊ကရုဏာ၊ စေတနာ ဆိုတာတွေလည်းနားမလည်ပါဘူး။ ဒီလူမျိုးတွေဟာ မြန်မာလို့အခေါ် ခံရဖို့ မထိုက်တန်သူတွေပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီကယူပါတယ်
He is an old fart that is all.
Yes, no useful old dog
လက်ရှိဗမာပြည်မှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမူ.ဟာကျယ်ပြန်.နေပါ တယ်။ဒီကိစ္စကို မီဒိယာတွေကအစ တရုတ်၊ကုလား၊ဗမာ၊ကုလားဒိန် အစသဖြင်. ခွဲခြားသုံးနေတာ ကိုတွေ.ရှိရတယ်။
မီဒိယာတွေ အနေနဲ. ဒီလိုမျိုး ခွဲခြားမူ.တွေကို မသုံးသင့်ပါဘူး၊ အားလုံးဟာ တိုင်းရင်းသားတွေပါ။ အနည်းငယ်သော တရုတ် နှင့် ဘင်းကလားဒေရှ်. ဘက်ကခိုးဝင် လာသူတွေ ကလွဲရင်ပေါ.။
ကျွန်တော်တို. သူရဲကောင်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မှာ ဒီလိုခွဲခြားတဲ့စိတ်မျိုးမရှိပါ။ ထို.ကြောင့် နေရာ နှင့်အခြားဝန်ကြီး နေရာများကို တိုင်းရင်းသားအစုံ၊ ဘာသာဝင် အစုံ ကို တာဝန်ပေးခဲ. နိူင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခု စစ်အစိုးရ လက်ထက် မှာတော့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေးခွဲခြားမူ့ တွေက ကြောက်မက်ဖွယ် ရာပင်၊
ယခုအချိန် အထိ တော့ ဗမာနိူင်ငံသား အာလုံးဟာ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကဒ်ပြားပဲ ကိုင်ရ ပါသေးတယ် ၊ အနှစ် နှစ်ဆယ် ကျော် နိူင်ငံသားတင်းပြည့် မဖြစ်သေးပါ။
လူမျိုးေ၇းဘာသာေ၇းခွဲခြားမှုကင်းတဲ့နိုင်ငံ၇ယ်လို့၇ှားပါတယ်။ ဒါပြုပြင်ပြောင်းလဲ၇အလွန်ခက်ခဲတဲ့ ‘ပုထုစဉ်ကောဥမ္မတကောပါ’။ အမေ၇ိကန်ပြည်ထောင်စုလို၇ာစု(၃)ခုနီးလုပြီဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတောင် သမ္မတ Obama အစိုး၇တက်တော့နှာနှပ်၇သူတွေအများကြီး၇ှိသလို၊ အခုလက်၇ှိကျဆင်းလာတဲ့သူ့၇ဲ့ approval ratings တွေကိုကြည့်ပြီး ၀မ်းသာလုံးဆို့ကြသူတွေမနဲပါဘူး။ ဒါပေမဲ့အခြေခံဥပဒေကတိတိကျကျကာကွယ်ထားတော့ ပြောနိုင်ဆိုနိုင်အေ၇းယူနိုင်ခွင့်တွေကအပြည့်၇ှိနေပါတယ်။ ပြောခြင်တာကမြန်မာအချင်းချင်း မယိုင်းပင်းမညီညွတ်တဲ့ကိစ္စပါ။ ဆ၇ာတင်မိုး မကွယ်လွန်မှီ LA မှာလုပ်တဲ့စာဆိုတော်လ စာပေဟောပြောပွဲ (ဆ၇ာ့နောက်ဆုံးသြ၀ါဒ) မှာစကားလက်ဆုံကျ၇င်းပြောသွားတာ သတိ၇ပါတယ်။ နယ်စပ်မှာသူေ၇ာက်သွားတော့ ကျောင်းသားအဖွဲံတွေအစိတ်စိတ်ကွဲတာမြင်လို့ လူကြီးတေ၇ာက်အနေနဲ့ဝင် ဆုံးမတော့ ပိုဆိုးလာလို့ ‘ကိုယ့်ခေါင်းမကျအောင်မနဲေ၇ှာင်ထွက်ခဲ့၇တယ်ဗျာ’ ဆိုတဲ့ဝမ်းနဲစကားကိုသတိ၇မိပါတယ်။ (၂) ယောက်၇ှိ၇င်အဖွဲ့ (၃)ဖွဲ့ထောင်တတ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေ၇ဲ့စိတ်ဓါတ်ဘယ်ထိသက်ဇိုး၇ှည်မယ်မသိပါ။ ‘ငါ’ဆိုတဲ့အတ္တ၀ါဒကြီးတဲ့နေ၇ာမှာပြိုင်စံ၇ှားတဲ့ ကျွန်တော်တို့၇ဲ့အယူမှားဖြစ်တဲ့အကျင်ဆိုးကိုပြင်နိုင်ကြဘို့ကြိုးစားကြဘို့လိုပါတယ်။ ဗမာဖြစ်ပြီးဗမာစိတ်မ၇ှိကြသူတွေတနေ့တော့ဗမာ့လူနေမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းကိုဘဲပြန်လာကြ၇မှာမုချပါဘဲ။ မပူပါနဲ့။ ဗျိုင်းဟာကျီးမဖြစ်နိုင်သလိုကျီးကလဲဗျိုင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ just matter of time ပါ။ အသက်၇လာတာနဲ့အမျှ ဗမာစိတ်တော့ပြန်၇ှိကြတာပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့’ငါ’ဆိုတဲ့အတ္တကတော့ကု၇ာနတ္ထိဆေးမ၇ှိတဲ့ေ၇ာဂါပါ။ တကိုယ်ကောင်ဆံပြီး၊ငါလုပ်တာမှမှန်တယ်၊ငါသာအသိဆုံးဆိုတဲ့စိတ်ယုတ်က အဲ့ဒီလူမှာပြောက်လဲခနပါပဲ။ ဘယ်သူသေသေငတေမာ၇င်ပြီးေ၇ာဆိုတဲ့စ၇ိုက်ဆိုးကအဲ့ဒီလူ၇ဲ့စိတ်ဓါတ်မှာဘယ်တော့မှမပျောက်ပါဘူ။ မ၇ှိချင်ဟန်ဆောင်လေ၊ အဲ့ဒီစ၇ိုက်ကပေါ်လေပါဘဲ။
အချုပ်ပြော၇၇င်-ဗမာစိတ်မ၇ှိလည်းတနေ့တော့သူဗမာဆိုတဲ့ identity ဟာပေါ်မှာအမှန်ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ‘အတ္တစိတ်’၇ှိသူကတော့ပြန်လမ်းမ၇ှိတဲ့စ၇ိုက်ဆိုးပါ။
ဗမာပြည်တိုတာမျိုး ဗမာနိူင်ငံသားဆိုတာမျိုးတွေ သုံးတာ ကြား၇တာနားဝင်မချိုလိုက်တာ… ..ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် တို့ကဗမာမဟုတ်ဘူးလေ… ..မြန်မာဘဲ… .တော်တော်ဝမ်းနည်းစ၇ာကောင်းတာက.. …ဗမာပြည်…..ဗမာနိူင်ငံ…. .ဆိုပြီးသုံးနေတဲ့အကျင့်မဖျောက်နိူင်တာဘဲ… .. .မြန်မာပြည်..မြန်မာနိူင်ငံသားလို့သုံးတာက လူမျိုးေ၇းခွဲခြားမူမရှိကြောင်းကိုပြသတာနဲ့တူတယ်လို့ထင်ပါတယ်………
အောက်က လင့်ကတဆင့် စာတွေဖတ်ကြည့်စေလိုပါတယ်။ “ဗမာနှင့် မြန်မာ” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ငယ်အောက်မှာ ဒီလိုေ၇းပါတယ်..။ အထောက်အထားအဖြစ် စာအုပ်လည်း ကူးတင်ပေးထားပါတယ်။
ကျုပ်မှာလည်း အဲဒီစာအုပ်ရှိပါတယ်။ တလုံးမှ ဖြတ်ညှပ်ကပ်ထားတာ မတွေ့ရပါဘူး။
“တို့ဗမာ အစည်းအရုံး”ဟူရာ၌ တို့ဗမာပြည်ထဲ၌ရှိသော လူမျိုးအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသည့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ဆောင်ခြင်း အထိမ်းအ မှတ်အဖြစ် “တို့ဗမာ”ဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာဟူသောစကားမှာ မြန်မာ၊ မာသည် ဟူသော အဓိပါယ်ကို ဆောင် သော်လည်း နှာသံပါ၍ ဘောင်ကျဉ်းသည်။ အားနည်းသည်။ ရှမ်း၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ကချင်၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ပလောင်၊ တောင်သူ၊ ဆလုံ၊ နာဂ၊ မြန်မာ စသော ဗမာတိုင်းရင်းသားအားလုံးကို ခြုံ၍ ငုံမိစေရန် “ဗမာ”ဟူသော စကားလုံးကို ရွေးသည်။ အသံထွက် မာကျော ၍ သုံးစွဲသည်။ တဖန် “ဘ”ကုန်းနှင့် “ဘမာ”ဟု မရေးဘဲ “ဗ”လချိုက်နှင့် ရေးခြင်းမှာလည်း “ဘ”သည် ရံဖန်ရံခါ “ဖ”သံထွက်သ ဖြင့် စိတ်မချရသောကြောင့် “ဗ”လချိုက်နှင့် “ဗမာ”ဟု ရေးသည်။ (တို့ဗမာအစည်းအရုံးသမိုင်း၊ ခေတ်သစ်လူငယ်တစုနှင့် တို့ဗမာ ၀ါဒအစ၊ စာ ၁၃၃) (ပုံ-၁))
တကယ်တော့ ကျုပ်တို့တတွေ..တိုင်းရင်းသားတွေ..“စကားလုံးများရဲ့ မာယာ” နည်းနည်း မိသွားတာပါ။
ဆရာကြီးရဲ့ဆောင်းပါးကိုသိတ်သဘောကျပါတယ်။ ဆရာ့ခံယူချက်နဲ့သဘောထားကိုလဲလုံးဝသဘောကျပါတယ်။ မြန်မာစိတ် မြန်မာပြည်ချစ်တဲ့စိတ် မြန်မာလူမျိုးဆိုတာကိုအမှတ်တမဲ့နဲ့မေ့နေသူတွေကိုလဲ လှုပ်နှိုးပေးရာရောက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကရင် ကယား ကချင် ချင်း စသည်ဖြင့်မြန်မာအပြင် အဲဒီလူမျိုးတွေထဲက တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးသွေးနှောပြီးမွေးလာသူတွေ၊ မြန်မာပြည်ထဲအတူနေ တရုတ်မျိုးနွယ် အင်ဒီးယန်းမျိုးနွယ်တွေနဲ့ သူတို့နဲ့သွေးနှောကြသူတွေအားလုံး မြန်မာစိတ် မြန်မာပြည်ချစ်တဲ့စိတ်ရှိကြရင် တစ်မျိုးသားတည်းပါဘဲ။
စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်း အမြင်ကောင်းသူတွေများလာလေလေ မြန်မာပြည်ကြီးပိုကောင်းလာလေလေဖြစ်မှာဘဲလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။
(မှတ်ချက်။ မြန်မာနှင့်ဗမာ အသုံးအနှုန်းမှာယခုအချိန်တွင်မတူကွဲပြားစွာလက်ခံသုံးစွဲနေသောကြောင့် ဗမာကြိုက်သူများ ဗမာဟုအစားထိုးဖတ်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။)
ရေးထားတာတွေက ကောင်းပါတယ် ဒီလိုမျိုးလေးတွေ ဖတ်ရတော့ တအားကောင်းပါတယ်နော် နောက်ထပ်လဲရေးပေးပါနော်
zay yar aung says:
မြန်မာပြည်မှာနေပြီးတော့ ကိုယ်ပြောချင်တာကိုလွတ်လပ်စွာပြော..ကိုယ့်သဘောထား ..ထင်မြင်ချက်၊ခံယူချက်တွေကို လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်ရမှာလား…တန်းတူအခွင့်အရေးတွေရမှာလား..အစိုးရမကောင်းတာကို မကောင်းကြောင်းကို လူစည်ကားရာနေရာမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်ရမှာလား..ကိုယ့်အတတ်ပညာာ၊အသိပညာကို လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ခွင့်ရမှာလား..
ဒါဆိုရင် ဖမ်းဆီးထားတဲ့ကျောင်းသားတွေ..နိုင်ငံရေးသမားတွေ..media သမားတွေ..blogger တွေ..ကိုဘာလို့ ဖမ်းထားတာလဲ..
တရားမဝင်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်လို့ လား..နေရာတကာမှာသူတို့ သတ်မှတ်ထားတာနဲ့ မကိုက်ညီရင်ဖမ်းတာကတရားလား..ပညတ်ချက်တွေနဲ့ ဖိအားပေးစေခိုင်းမှုတွေက ဒီမိုကရေစီလား..
အေး..အခုရွေးကောက်ပွဲကို လက်ခံတဲ့..လက်ခံချင်တဲ့လူတွေဆိုတာ ဒီမိုကရေစီင်္ဆိုတာကိုနားမလည်..မခံစားဖူး..တဲ့လူတွေ၊အသိဥာဏ်မရှိတဲ့လူတွေဘဲ
zay yar aung ပြောတာကိုထောက်ခံပါတယ်။လူတိုင်းကတော့ တရားမျှတမှုရှိတဲ့နေရာမှာဘဲကိုယ့်ပညာကိုပိုပြီးအသုံးချချင်ကြပါတယ်။ဆရာစိန်ဝင်းရဲ့စကားမှာလိုနေတာလေးထပ်ဖြည့်ချင်ပါတယ် တရားမျှတမှုတွေမရှိလို့မြန်မာတွေမြန်မာလို့အခေါ်မခံ၇တာ လို့ပါ။ဆရာကိုတောင်းဆိုချင်တာလေးတစ်ခုကတော့ ကလောင်ရဲ့ရှေ့မှာ (လူထု)ဆိုတာလေးဖြုတ်ပေးပါလို့။
လူထုဦးစိန်ဝင်း ပြောသွားတာတော်တော်ကောင်းတာပါ.. … ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က တရုတ်သွေးနှောတဲ့ ကပြားပေါ့ ။ ဦးစိန်ဝင်းပြောသွားသလိုပဲ … ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ဘိုးဘေးတွေ လက်ထက်ကတည်းက မြန်မာမှာ အခြေချလာကြတာလေ… အဲ့ဒီတော့ တော်တော်မြန်မာဆန်တဲ့ တရုတ်ကပြားမပေါ့ ။ တခါခါတော့ တ နဲ့ သ အသံသိပ်မကွဲပါဘူး ။
စကားသံဝဲတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရယ်စရာလေးတစ်ခုကြုံဖူးတယ် .. အစ်မတော်ပေါ့ …သွားလိုက်တာ ၈ နှစ် ပါ ။ ပြန်လာတော့ .. ၀က်ရုပ်လေးကို တွေ့ တော့ သူဒီလိုခေါ်လိုက်တော့ တော်တော်ရယ်ရတယ် ….သူက ၀က်ကလေးကို ”ဟယ်….၀ုတ် ကလေး ”တဲ့ ။ သူသွားတုန်းအသက် ၂၄ နှစ်ပါ ။ ၂၄ နှစ် လုံးမြန်မာလို ပြောလာတာ ၈ နှစ်နဲ့ မေ့ပစ်ရမလားဆိုပြီးသူ့ကို ကျွန်တော်နဲ့ညီမလေးတို့ ဟားသေးတယ် .. ခုတော့ သူ ပြန်နေသားကျပြီပေါ့ …
သိပ်ကောင်းပါတယ် နောက်ထပ်လဲတင်ပေးစေချင်ပါတယ် ကို့မြန်မာကိုတန်ဖိုးထားရမှန်းသိစေတာပေါ့နော်
ဆရာလူထုစိန်ဝင်း ကတော့ဘယ်လို တရုတ်မကလေးတွေနဲ့ တွေ့ ဖူးလို့ပြောလဲမသိဘူးဗျ.. ကျွန်တော်သိတဲ့ မန်းလေးက ရွှေတရုတ်မလေးတွေ ကတော့ မြန်မာဆိုခပ်ရှဲရှဲပဲခင်ဗျ.. ကျွန်တော်နဲ့သိတဲ့တရုပ်မလေးကပြောဖူးတယ် သူ့ ကိုကောင်လေးချောချောလေးလာလိုက်တော့ ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ထင်လဲတဲ့…”နင်ကမြန်မာဖြစ်နေလို့ မကြိုက်နိုင်ဘူး ” လို့ ပြောလိုက်တယ်တဲ့.. ခွဲခြားချင်လို့ ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ.. ဒါပေမဲ့.. မခွဲခြားရေးကိုပိုသိသင့်တဲ့လူတွေက သူတို့ တွေပဲလို့ ထင်ပါတယ်… ဘာလို့ ဆို ကျွန်တော်တို့ က..အောက်ကလူတွေကိုး… ခွဲခြားဖို့ အင်အားမရှိပါဘူး… Foreign resident ပေးဖူးတဲ့ comment မှာဖတ်ဖူးတာ.. ဘာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ လက်အောက်ခံနိုင်ငံ တစ်ခုအဖြစ် တဖြည်းဖြည်းရွေ့ လျားလာတယ်ဆိုလား… ဟုတ်လဲဟုတ်သလိုကိုး… အခုလဲမြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းလုပ်နေပြန်ပြီ.. ဘယ်သူတွေပိုအကြိုးရှိမယ်တော့… ကြည့်ရဦးမှာပါပဲ…
“““မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တယ်ထင်သလား။ ဗြဟ္မစိုရ်တရားနဲ့ ဟီရိသြတပ္ပတရားတွေကို နားလည် သဘောပေါက်ပြီး လိုက်နာကျင့်သုံး မှ မြန်မာလူမျိုးစစ်တာ။ နိုင်ငံခြားမှာ ဘယ်လောက်အကြာကြီးနေနေ ဒီတရားတွေကို လိုက်နာကျင့်ကြံနေသရွေ့မြန်မာလူမျိုးလို့ ခေါ်နိုင်တယ်။ ဒီ တရားတွေကို လုံးဝပစ်ပယ်ပြီး ‘ဘယ်သူသေသေငတေမာပြီးရော’ ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးထားသူဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာနေလည်း မြန်မာလူ မျိုးလို့ အခေါ်ခံရဖို့ မထိုက်တန်ပါဘူး။”””ဟုတ်ပါတယ် ဆရာလူထုစိန်ဝင်းပြောတာအမှန်ပါ။ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာနေ၊ဘယ်သူကမှယုံကြည်လို့ အပ်နှင်းထားတဲ့အာဏာပိုင်လဲမဟုတ်တဲ့ လက်တဆုပ်စာ မသမာသူခိုး ငညစ်တွေကိုသစ္စာခံနေကြသူတွေကို အံ့သြလွန်းလို့ ပါရှင်